MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈)
USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈)
ကိုနိုင်း ● ပြတင်းတံခါးအဖွင့် ဇာခန်းဆီးအလွင့် (၃၈)
ကိုနိုင်း ● ပြတင်းတံခါးအဖွင့် ဇာခန်းဆီးအလွင့် (၃၈) (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂ဝ၁၇ ● စစ်ကိုင်းအက်ပီဂရမ်ကို ခံစားခြင်း ဒီအပတ်တော့ ပြတင်းတံခါးဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အလွန်ကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာသတင်းကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ ဒီသတင်း ဟာ ပြတင်းတံခါးရဲ့ဇာခန်းဆီးဖြစ်တဲ့နှလုံးသားကို လှုပ်ခါလိုက်ပါတယ်။ “ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာ မင်းသစ်ဆုံးပြီ” တဲ့။ အင်မတန်မှနှမျောဖို့ကောင်းတဲ့ ကဗျာဆရာကြီး၊ စာရေးဆရာကြီးတယောက် ကြွေလွင့်ခဲ့ရပြီ။ သူက တခေတ်မှာ တယောက် လို့ဆိုရအောင် အနုပညာပါရမီနဲ့နေထိုင်တဲ့သူတယောက်ပါပဲ။ ၁၉၇ဝ မိုးဝေမဂ္ဂဇင်းခေတ်မှာကဗျာတွေရေးခဲ့သလို၊ ဝတ္ထုတိုတွေလည်းရေးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ဝတ္ထုတွေက စတိုင်ရာဝတ္ထုတွေပါ။ သူ့စတိုင်ရာ ဝတ္ထုတွေ ထဲမှာ “အိပ်မက်ကွန်ဖရင့်” “တစ္ဆေရင်ကွဲ” “မဟာနန္ဒာ Ph7″ စတဲ့ဝတ္ထုတိုတွေက စာဖတ်သူတွေစိတ်ထဲမှာစွဲငြိခဲ့တဲ့အနုပညာ ဖန်တီးမှုတွေပါပဲ။ ဒါတွေအပြင် ဆရာမင်းသစ်ဟာ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် တွံတေးသိန်းတန်ရဲ့နာမယ်ကြီးသီချင်းတွေကိုလည်း ရေးဖွဲ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်းဂျာနယ်တွေမှာလည်း အယ်ဒီတာ၊...
အောင်သူငြိမ်း ● ခရီးရှည် အိမ်အပြန်လမ်း – အပိုင်း (၁၇)
အောင်သူငြိမ်း ● ခရီးရှည် အိမ်အပြန်လမ်း – အပိုင်း (၁၇) (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၇ ● ဘုရားသုံးဆူ နေ့ရက်များ (၅) ကျနော်တို့ ဘုရားသုံးဆူစခန်းရှိစဉ် သာသနာပြုအဖွဲ့တွေလည်း စခန်းကို ရောက်လာကြတယ်။ သူတို့အတွက် ကျနော်တို့ က ဈေးကွက်အသစ်ဖြစ်နေမလားပဲ။ ရောက်လာတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခုက ဂျိန်းဘာသာလိုမျိုး အဖွဲ့ပဲ။ သူတို့အဖွဲ့အစည်း အခြေခံအယူဝါဒကို PROUT (Progressive Utilization Theory) လို့ ခေါ်ကြတယ်။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်မှာ အိန္ဒိယပညာရှင် နဲ့ လူမှုရေးလှုပ်ရှားသူ ပရာဘတ် ရာဂျန် ဆာကာ...
ကိုသန်းလွင် ● ဆိုကရေးတီးနှင့် လူ့ဘဝ
ကိုသန်းလွင် ● ဆိုကရေးတီးနှင့် လူ့ဘဝ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၇ (၁) ဘီစီ ၃၉၉ ခုနှစ်က ဆိုကရေးတီးကို သေဒဏ်ချမှတ်လိုက်သောအခါ သူ့မိတ်ဆွေများကသူ့ကို လွတ်မြောက်ရာ လွတ် မြောက်ကြောင်း ထွက်ပြေးဘို့ အကြံပြုကြပါသည်၊ သူတို့တွင် ထောင်အရာရှိများကို လာဘ်ထိုးရန်ငွေကြေး ရှိသည်၊ သူတို့ နားလည်ထားကြသည်မှာ ထောင်အရာရှိများကလည်း ဖီလိုဆိုဖာကြီးကို လွတ်ရာလွတ်ကြောင်း သွားစေချင်ကြသည်၊ သူတို့လိုအပ်နေသည်မှာ ဆိုကရေးတီးက သဘောတူညီဘို့ပင်ဖြစ်သည်။ သူကထွက်ပြေးရန်အကြံပေးခြင်းကိုလက်မခံပါ၊ ဥပဒေအတိုင်း တသက်လုံးနေလာခဲ့သည်၊ ဘယ်သောအခါမှ ဥပဒေကို မချိုးဖောက်ဟု ဆိုသည်။ (၂) ကျွန်တော့်ဖခင်က ဤအတိုင်းပြောပြခဲ့ပါသည်၊ ကျွန်တော်သည်...
ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် ● သမ္မတဆိုတာ
ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် ● သမ္မတဆိုတာ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၇ Tags: ကာတွန်း ရွှေဗိုလ်
လင်းခါး – ယင်ကောင်
ယင်﻿﻿ကောင်﻿ လင်းခါး (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၇ ယင်﻿﻿ကောင်﻿ဟာ ထူးဆန်းတယ်﻿ အသံမြည်﻿တယ်﻿ လက်﻿နံတယ်﻿ တဝီဝီမြည်﻿တယ်﻿ နှာ﻿မောင်းပွတ်﻿တယ်﻿ ﻿ရောဂါပိုး သယ်﻿﻿ဆောင်﻿တယ်﻿ ယင်﻿﻿ကောင်﻿ဟာ သနားဖို့﻿ကောင်းတယ်﻿ ဘုန်း﻿တော်﻿﻿ကြောင့်﻿ ဗမာမင်းအဆက်﻿ဆက်﻿ဟာ ယင်﻿﻿ကောင်﻿ကို မြင်﻿ဖူးမယ်﻿ မထင်﻿ဘူး ယင်﻿﻿ကောင်﻿လည်း ဘုရင်﻿﻿တွေကို မြင်﻿ဖူးမှာ မဟုတ်﻿ဘူး ဒါက﻿တော့ ဘုန်းကံနဲ့ မဆိုင်﻿ဘူးထင်﻿တယ်﻿ တ﻿နေ့﻿တော့...
အောင်ငြိမ်းချမ်း (Myanmar Now) ● နည်းပညာသစ်နှင့် ထိတွေ့လာသော ရခိုင်ဒေသလယ်သမားများ
အောင်ငြိမ်းချမ်း (Myanmar Now) ● နည်းပညာသစ်နှင့် ထိတွေ့လာသော ရခိုင်ဒေသလယ်သမားများ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၇ မြေပုံ၊ မင်းပြား (Myanmar Now) — ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြေပုံမြို့နယ်၊ လောင်းဒရိတ်ကျေးရွာ အပြင်ဘက် တောင်ကုန်း ငယ်များကြားရှိ လယ်ကွင်းမှာ စပါးပင်များဖြင့် စိမ်းလန်းနေသည်။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်နှင့် နည်းစနစ်သစ်သုံးထားသော သူ၏ လယ်သည်...
ထွန်းအောင်ကျော် – ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားနိုင်ပါ့မလား
ထွန်းအောင်ကျော် – ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားနိုင်ပါ့မလား (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၇ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များACကလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဟုပြစ်တင်စွပ်စွဲခံနေရမှု နှင့်မိမိတိုင်းပြည်တွင်း ရှိသူများက ဗုဒ္ဓဘာသာကို သစ္စာဖောက်ဖျက်သူအဖြစ် စွပ်စွဲမှုများအကြားတွင် သူမသည်သူမ၏ တိုတောင်းသော အုပ်ချုပ်မှုကာလ အတွင်း ညပ်နေ ခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပြီး ၂နှစ်တာကာလနီးပါးရှိလာခဲ့ချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အာဏာအရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်သည် စစ်တပ်နှင့်အမျိုးသားရေးဗုဒ္ဓဝါဒီတို့က...
ကာတွန်း ဖိုးဇော်(လှိုင်သာယာ) – ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
ကာတွန်း ဖိုးဇော်(လှိုင်သာယာ) – ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၇ Tags: ကာတွန်း ဖိုးဇော် (လှိုင်သာယာ)
မောင်အောင်မွန် – တင်မိုးကို အဘယ့်ကြောင့် လူအများကချစ်ကြသနည်း
မောင်အောင်မွန် – တင်မိုးကို အဘယ့်ကြောင့် လူအများကချစ်ကြသနည်း ကျွန်တော်တွေးမိသလို ရေးပါမည် (၂၉၁) (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၇ (၁) အကယ်၍သာ ကဗျာဆရာကြီးတင်မိုး အသက်ရှင်နေပါလျှင် ၂၀၁၇ ခု၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့တွင် အသက်(၈၄) နှစ်ပြည့်မည်။ သို့သော်လည်း သူမပျော်သော သူမနေတတ်သော အရပ်တွင် ကြိုးစားနေထိုင်ရင်း ကွယ်လွန်ရ၏။...
ကျော်နိုင် – စည်ပင်ဥပဒေ၊ ကျွန်တော် နှင့် ဂျင်း
ကျော်နိုင် – စည်ပင်ဥပဒေ၊ ကျွန်တော် နှင့် ဂျင်း (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၇ အသစ်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေကို ကျွန်တော် တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားသလည်းဆိုတော့ စည်ပင်ဥပဒေအသစ်ဟာ ၁၉၂၂ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြူနီစီပါယ်အက်ဥပဒေကို မှီငြမ်းရေးဆွဲတယ်လို့ ကြားသိရလို့ပါ။ ဒါဆို ၁၉၂၂ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြူနီစီပါယ် အက်ဥပဒေဆိုတာကြီးကိုကော ဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားသလည်းလို့ မေးကြလိမ့်မယ်။...
အောင်သူငြိမ်း ● ခရီးရှည် အိမ်အပြန်လမ်း – အပိုင်း (၁၆)
အောင်သူငြိမ်း ● ခရီးရှည် အိမ်အပြန်လမ်း – အပိုင်း (၁၆) (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇ ● ဘုရားသုံးဆူ နေ့ရက်များ (၄) နိုင်ငံရေးအကွက်များ- အုပ်စုများ ကျနော်ထင်မှတ်မထားဘဲ ဘုရားသုံးဆူ တပ်ရင်း (၁၀၁) စခန်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရတယ်။ ဖြစ်ပုံက ဒီလို၊ သံလွင် ဥသုထစခန်းမှာ ကျင်းပတဲ့ ABSDF...
လှကျော်ဇော ● တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး – အပိုင်း (၃)
လှကျော်ဇော ● တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး – အပိုင်း (၃) (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၇ ● ရှီကျင့်ဖင် အတွေးအခေါ် (ခေတ်သစ်ကာလနဲ့အညီ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီတည်ဆောက်ရေး) ၂ဝ၁၇ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်နေ့ မနက် ပီကင်းပြည်သူ့ ခန်းမကြီးအတွင်း သဘာပတိစင်ပေါ်သို့ သမ္မတရှီကျင့်ဖင် ဝင် ရောက်လာတဲ့အခါ...
မောင်လူရေး – ဖွတ်ဂါရာမ “တင်းပါး” သံကြီး
မောင်လူရေး – ဖွတ်ဂါရာမ “တင်းပါး” သံကြီး (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၇ ဖွတ်ဂါရွာမတရွာလုံး အုံးအုံးကျွက်ကျွက်ဖြစ်နေသည်။ ဒီအုံးအုံးကျွက်ကျွက်က တရွာလုံးမှာ တအိမ်ချင်းစီဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဟာ။ တချို့အိမ်များတော့ ဒါးဆွဲဒုတ်ဆွဲ။ တချို့လဲ အိမ်ခွဲမယ်၊ အိုးခွဲမယ်နှင့်။ တချို့တော့ အိမ်ပေါ်က နှင်ချခံရသည်။ သိတယ်မဟုတ်လား။ တရွာလုံးပါသည့်ကိစ္စဆိုတာ နိုင်ငံရေးနှင့် ဘောပွဲဘဲရှိသည်။ အခုဟာက...
ကာတွန်း ညီပုချေ – အရှုံးခံသူများ
ကာတွန်း ညီပုချေ – အရှုံးခံသူများ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၇ Tags: ကာတွန်း ညီပုချေ
လွတ်လပ်လှိုင်းမဂ္ဂဇင်း မိတ်ဆက် (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၇ လက်ခံရရှိတဲ့ အကြောင်းကြားစာက အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ကြိုဆိုကြပါစို့။ မိတ်ဆွေများခင်ဗျား … လွတ်လပ်လှိုင်းလို့အမည်ရတဲ့ မဂ္ဂဇင်းလေးတခုကို ထုတ်ဝေသွားမယ့်အကြောင်း နိုဝင်ဘာ(၁၉)ရက် စာဆိုတော်နေ့ အခါသမယမှာ အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါတယ်။ လက်ခံရရှိတဲ့ စာမူတွေအပေါ်မူတည်ပြီး ဒီဇင်ဘာ(၁)ရက်နေ့ကနေ စတင်ဖော်ပြသွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ လွတ်လပ်လှိုင်းမဂ္ဂဇင်းကို စာမူတွေပေးပို့ကြဖို့ကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။လက်ပွတ်ဖုန်း (Smartphone)တွေနဲ့ ကျောက်သင်ပုန်း...
မိုးချိုသင်း – ဒီနေ့ အဖေသာရှိရင် အဖေ့အသက် ၈၄ နှစ်
မိုးချိုသင်း – ဒီနေ့ အဖေသာရှိရင် အဖေ့အသက် ၈၄ နှစ် (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၇ ဒီနေ့ အဖေသာရှိရင် အဖေ့အသက် ၈၄နှစ် ရှိပြီပေါ့။ အဖေ့ကို ချစ်ခင်လွမ်းဆွတ်စိတ်တွေနဲ့ အဖေ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ၊ တပည့် သားမြေးတွေက ရေးကြတာတွေ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလို ဖတ်ရ ကြားရပါတယ်။...
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ -Freshman, Sophomore, Junior & Senior
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ -Freshman, Sophomore, Junior & Senior (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၇ No tags for this post.
၀င်းအောင်ကြီး (မောင်အောင်မွန်) – ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာထင်အောင်
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာထင်အောင် – ဖျောက်နေသည့်ကြား ပျောက်မသွားသေးသူ ၀င်းအောင်ကြီး (မောင်အောင်မွန်) – ကျွန်တော်တွေးမိသလို ရေးပါမည် (၂၉၀) (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၇ (၁) ၁၉၅၁ ခု၊ကျွန်တော် အကြိုတက္ကသိုလ်ဝင်တန်း (Pre- Matric) ရောက်လာ၍ အင်္ဂလိပ်စာ(၃)အုပ်ထဲ Selections From Burmese Folk-Tales By...
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကြောင့် ရခိုင်ဒေသခံအများအပြား အိမ်သာဆောက်ရန် တွန့်ဆုတ်နေ
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကြောင့် ရခိုင်ဒေသခံအများအပြား အိမ်သာဆောက်ရန် တွန့်ဆုတ်နေ ဇာနည်ဝင်း/Myanmar Now (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့က တွေ့ရသော မင်းပြားမြို့နယ်၊ ကြိမ်ချောင်းရွာမြင်ကွင်းတစ်ခု (ဓာတ်ပုံ – ဇာနည်ဝင်း/Myanmar Now) ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မင်းပြားမြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသ နေအိမ် အများအပြားတွင် အိမ်သာ မရှိကြသည့် အဓိက အကြောင်းရင်းများထဲတွင်...
မိုးချိုသင်း – လွမ်းတယ် အမေ
မိုးချိုသင်း – လွမ်းတယ် အမေ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၇ (သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်က ကူးယူပါတယ်) ဒီနေ့တော့ Death Valley National Park ကို ရောက်ခဲ့တယ်။ Death Valley ဆိုတဲ့အတိုင်း ခြောက်သွေ့တဲ့ သဲကန္တာရကြီးမှာ ရှိတာ။ ရာသီဥတုက ပူတဲ့အချိန် တရားလွန် ပူ၊ အေးတဲ့အချိန် တရားလွန်အေးတဲ့...
ဒေါက်တာညီညီ ကို ကန်တော့
ဒေါက်တာညီညီ ကို ကန်တော့ (မောင်စွမ်းရည် သတင်းပို့သည်) မိုးမခ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၇ နယူးယောက်မှ scadale မှာ နေထိုင်လျက်ရှိတဲ့ အသက် ၈၉နှစ် အရွယ်ရှိ ယူနီဆက် ဒါရိုက်တာ(ငြိမ်း)ကို ၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်ပိုင်းက နှစ်စဉ်ပြုမြဲ ကန်တော့ပွဲကို နယူးယောက် ၀ိမုတ္တိ...
အခွန်ထမ်းသာဂိ – အခွန်ကိစ္စ ဆိုလို့
အခွန်ထမ်းသာဂိ – အခွန်ကိစ္စ ဆိုလို့ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၇ ယနေ့ အမေရိကန်လွှတ်တော် ၂ ရပ်လုံးမှာ ၀င်ငွေခွန်ပြင်ဆင်ရေး ဥပဒေကြမ်းတွေ တင်သွင်းဖို့ လုပ်နေပါတယ်။ ရီပတ်ဘလစ်ကန် လက်ယာစွဲ လွှတ်တော်အမတ်တွေ ကြီးစိုးတာမို့ သူတို့ Tax Reform ဟာ လူချမ်းသာတွေ အခွန်သက်သာစေတဲ့ ဥပဒေကြမ်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဝေဖန်ပြစ်တင်ခြင်း ခံနေရပါတယ်။...
ငြိမ်းဝေ(ကဗျာ့အိုးဝေ) – ဝံပုလွေများနဲ့အတူအူရန် ငြင်းဆိုသူ
ငြိမ်းဝေ(ကဗျာ့အိုးဝေ) – ဝံပုလွေများနဲ့အတူအူရန် ငြင်းဆိုသူ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၇ (သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေ ကူးပါတယ်)(၁) ၁၉၁၇ ခုနှစ်ဝန်းကျင် ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းအပေါ် သမိုင်းပညာ ရှင်အမျိုးမျိုး ကရပ်တည်ချက် အမျိုးမျိုးအပေါ်မူတည်ပြီး အမြင်အမျိုးမျိုးနဲ့ သုံးသပ်ကြတာရှိပါတယ်။ ဒီလိုသုံး သပ်ကြတဲ့ အထဲမှာ ရုရှတော်ဝင်ကဗျာဆရာကြီး`အလက်ဇန်ဒါ ဘလော့´ပြောတဲ့စကားကတော့ ကျနော့်ကို အစွဲဆောင်နိုင်ဆုံးစကားဖြစ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။သူက အဲဒီကာလကြီးကို`ကြောက်မက်ဖွယ်...
မောင်စွမ်းရည် – ပန်းချီဆရာ ကာတွန်းဆရာ ”ထွန်းလှိုင်”
မောင်စွမ်းရည် – ပန်းချီဆရာ ကာတွန်းဆရာ ”ထွန်းလှိုင်” (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၇ မျက်မှောက်ခေတ် ပန်းချီကာတွန်းလောကမှာ ”ထွန်းလှိုင်” ဆိုတဲ့အမည်ကိုကြားဖူး၊ သိဖူးသူ အလွန်နည်းခဲ့ပါပြီး ပြောပ လောက်အောင် ပုံတွေမဆွဲဖူးလို့ မကျန်ရစ်လို့ လူသိနည်းတာ ဖြစ် မှာပေါ့လို့ ပြောလို့မဖြစ်ပါ။ သူ့လက်ရာပန်းချီသရုပ်ဖော် စာအုပ် တစ်အုပ်မှာ ၁၉၅၁ ခုနှစ်က ပထမဆုံး...
လောကဓာတ်ခန်း သာဂိ – Office Application in the Cloud (35)
လောကဓာတ်ခန်း သာဂိ – Office Application in the Cloud (35) အိမ်သုံး ကျောင်းသုံး ရုံးသုံး – GMail နဲ့ Google Office Application အခြေခံလမ်းညွှန် (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၇ Text basics စာသားများအတွက် အခြေခံ ဂူးဂဲဆလိုက်တွေ နဲ့...
လူအိမ် – ငှက်ပျောပင်လေး
ငှက်​​ပျောပင်​​လေး လူအိမ် (မိုးမခ)၊ နိုဝင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၇ အရွယ်​မတိုင်​မီကိုယ်​ဝန်​​ဆောင်​ထား မိန်းမငယ်လို သက်​ကြီးပိုင်းအဘိုးအိုလို သူ့ခါးဟာ ကိုင်းလို့ ​ဘေးမှာ အငယ်​​လေး ကလူမမယ်​ အလတ်​က မူကြိူ အကြီး​ကောင်​က လဲကျမသွား​အောင်​ သူ့ခါးကိုဖက်​လို့ သူ့သခင်​က သူ့ချိုင်းကိုဝက်​ခွကြီး​ထောက်ပြီး ​စောင့်​​ရှောက်​​ပေးရှာပါတယ်​ သူ့အခိုင်​ကြီးစားသုံးမရမချင်း​ပေါ့ ဒါပြီးရင်​​တော့ ဘဝတပါးသူ​ပြောင်း​ရွေ့မယ်​ ကွယ်​လွန်​​တော့​ရော ဘာအ​ကြောင်းလဲ ​...
အောင်သူငြိမ်း ● ခရီးရှည် အိမ်အပြန်လမ်း – အပိုင်း (၁၅)
အောင်သူငြိမ်း ● ခရီးရှည် အိမ်အပြန်လမ်း – အပိုင်း (၁၅) (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၇ ● ဘုရားသုံးဆူ နေ့ရက်များ (၃) ကျနော်တို့ ကျောင်းသားစခန်းက ရဲဘော်တွေက အားလုံး စာတတ်တွေချည်း၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထင်တလုံးနဲ့ လာကြတဲ့ မြို့နယ်အသီးသီးက သပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေ။ စာတတ်တယ်၊ စကားကတ်တယ်၊ စကားတလုံးကို သက်သေ...
စန်းသူ့မောင် ● လူ့အလို
စန်းသူ့မောင် ● လူ့အလို (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၇ ” မြို့ထဲလမ်းမပေါ် ××× ကားရောင်စုံများစွာ ××× တစ်စီးမှကိုယ်မပိုင်ပါ” ဒီသီချင်းက ကျမတို့သီချင်းပဲ။ တစ်စီးမှမပိုင်လည်း ကိစ္စစိုးစဉ်းမရှိ။ ဒီနေ့ ရန်ကုန်တစ်မြို့ လုံး အရပ်လေးမျက်နှာမှာ ပြေးဆွဲ နေတဲ့လိုင်းကားတွေဟာ ကျမတို့အသုံးပြုနိုင်၊ စီးနိုင်တဲ့ကားတွေပဲပေါ့။ ခုမှမဟုတ်၊ တစ်သက်တာပတ်လုံး စီးနင်းအသုံးပြုခဲ့ ရတဲ့၊...
ကာတွန်း kzzh ● တို့ မေမေ
ကာတွန်း kzzh ● တို့ မေမေ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၇ Tags: ကာတွန်း - KZZH
မြတ်စံ ● ကျနော် … ကိုသီဟ၊ ကိုသူရ (ဇာဂနာ) နဲ့ ၉ လုံးဘွဲ့ရ ဆွေမင်း
မြတ်စံ ● ကျနော် … ကိုသီဟ၊ ကိုသူရ (ဇာဂနာ) နဲ့ ၉ လုံးဘွဲ့ရ ဆွေမင်း (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၇ ဒီရက်ပိုင်းကျောက်မြောင်းမီးပွိုင့်လမ်းဆုံအရောက် ဒီလှိုင်းဂျာနယ်တိုက်ရှေ့မှာ စက်ဘီးကလေးတစီးနဲ့ ဂျာနယ်တွေ တပွေ့တ ပိုက်နောက်ကယ်ရီယာပေါ်တင်ပြီး အသောကလေးနှင်စီးသွားတဲ့ လူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရချိန်… ကျနော်နဲ့ အင်းစိန်မှာ ရယ်၊ မြစ်ကြီးနားထောင်မှာရယ် ဆုံခဲ့ဖူးတဲ့ ကိုဆွေမင်းလားလို့...
Page 1 of 86112345...861»
ထွန်းအောင်ကျော် - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားနိုင်ပါ့မလား
ကျော်နိုင် - စည်ပင်ဥပဒေ၊ ကျွန်တော် နှင့် ဂျင်း
မောင်အောင်မွန် - တင်မိုးကို အဘယ့်ကြောင့် လူအများကချစ်ကြသနည်း
လှကျော်ဇော ● တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး - အပိုင်း (၃)
>Than Win Hlaing - Daw Khin Kyi
>Law Eh Soe - The4Photos
>Two Burmese among six killed in Russian plane crash
>Thit Kaung Ein - Book Poem
ရန်နောင် (ဗိုလ်တထောင်) - ၂၀၁၄ ရဲ့ သိန်း ၁၀၀ တန် အလှမယ်
>mar mar aye - 306
Midea ကုမ္ပ္ပဏီမှ အိမ်သုံးပစ္စည်းအမျိုးမျိုးမိတ်ဆက်ရောင်းချပွဲပြုလုပ်
>Burmese Junta accuse some Burmese local artists of drug abuse
ကာတွန်း မောင်မောင်ဖောင်တိန် - ၀ှက်ဖဲတွေ
>Junta assign one tractor per 100 acre rice field for farmers
>How Burmese runs their political event and ceremony
ကြံ့ဖွံ့အစုိုးရက လက်ပံတောင်းတောင်သံဃာတွေကို တိုက်ရိုက်တောင်းပန်ဟု ဆို
Join 89,939 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month November 2017 (138) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
ကိုနိုင်း ● ပြတင်းတံခါးအဖွင့် ဇာခန်းဆီးအလွင့် (၃၈) https://t.co/jYkpTcGHdP https://t.co/aSuK3nzR1B about6hours ago ReplyRetweetFavorite
အောင်သူငြိမ်း ● ခရီးရှည် အိမ်အပြန်လမ်း – အပိုင်း (၁၇) https://t.co/Wg2n1sYM06 https://t.co/kPlDTp6r2G about 8 hours ago ReplyRetweetFavorite
ကိုသန်းလွင် ● ဆိုကရေးတီးနှင့် လူ့ဘဝ https://t.co/ezum2b7eQ3 https://t.co/n9XFg7RFl7 about 8 hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် ● သမ္မတဆိုတာ https://t.co/wp5TjXUujz https://t.co/ozq82Q0dCQ about 15 hours ago ReplyRetweetFavorite
လင်းခါး – ယင်ကောင် https://t.co/CJM0KAnnmn https://t.co/AEyxl7SdU4 about 15 hours ago ReplyRetweetFavorite
Market Place - ဈေးရောင်း ဈေးဝယ် (5)
MoeMaKa Network - မိုးမခနဲ့ မိတ်ဆွေများ (24)
Online Shop @ MoeMaKa (6)
About MoeMaKa (80)
ခရီးသွား ဆောင်းပါး (63)
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် (178)
ဇော်အောင် (မုံရွာ) (132)
Maung Kyay Yay (5)
Han Thit Naing (154)
Junior WIn (26)
Yan Naung (Bo Ta Htaung) (332)
ကာတွန်း – အောင်မော် (113)
ကာတွန်း ၀င်းအောင် (37)
ကာတွန်း ATH (199)
ကာတွန်း ဇာနည်ဇော်ဝင်း (51)
ချမ်းမြ (မုိုးမခအထောက်တော်) (48)
ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) (40)
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သချာင်္) (69)
မိုးမခကို ပေးတဲ့စာ (264)
ရေခြားမြေခြား မြန်မာများ (210)
သမိုင်းနဲ့ အစဉ်အလာ (954)
လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ (365)
ဖြစ်ရပ်များ၊ အမှတ်တရများ (184)
Cartoon Box (3,188)
Copyright © 2017 MoeMaKa Burmese News & Media. All Rights Reserved.
ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းအရေး မိုးမခဆောင်းပါးများ ထွက်ပါပြီ
ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းအရေး မိုးမခဆောင်းပါးများ ထွက်ပါပြီ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ်မှာ...
မိုးမခမဂ္ဂဇင်း နောက်ဆုံးထုတ်ကို WE မှာ ဝယ်ပါ (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...
မိုးမခထုတ် မောင်စွမ်းရည်စာအုပ် WE မှာ ဝယ်ပါ
မိုးမခထုတ် မောင်စွမ်းရည်စာအုပ် WE မှာ ဝယ်ပါ (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...
မိုးမခ သြဂတ်စ် ထွက်ပြီ
မိုးမခ သြဂတ်စ် ထွက်ပြီ သြဂတ်စ် ၁၅၊ ၂၀၁၇ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ကလောင်ရှင်တွေရဲ့...
လှကျော်ဇော ● တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (၁၉) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး – အပိုင်း (၃) | MoeMaKa Burmese News & Media on လှကျော်ဇော ● တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (၁၉) ကြိမ်မြောက်ကွန်ဂရက် – အပိုင်း (၁)
Zarni Gyi on ဌေးမင်းခိုင် ● ဘယ်ကကြိုးမှာ ဘယ်လို​မျောမည်နည်း
Dr. Maung Maung Gyi on မောင်စွမ်းရည် – ငါ့ဟာပြန်ပေး
sa win on ကိုအောင်မှိုင်း – ဆန်ရှင်၊ အမျိူးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့  ချောက်ထဲကျတော့မလို့
Zarni Gyi on အေးငြိမ်း ● အဝေးသင်တက္ကသိုလ်၊ ဒုတိယနှစ် မြန်မာစာ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်မှ အမှားများ
Maung Swan Yi Myanmar Now ကချင် ကမ်လူဝေး ကာတွန်း Joker ကာတွန်း OKKW ကာတွန်း ကိုခေတ် ကာတွန်း ညီပုချေ ကာတွန်း ညီထွေး ကာတွန်း မိုးသွင် ကာတွန်း ဆွေသား ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် ခက်ဦး စိုးနေလင်း ဆန်ဖရန် ဇင်လင်း ဇာနီကြီး ထက်ခေါင်လင်း (Myanmar Now) ထင်အောင် ဒီလူည နရီမင်း ဘင်္ဂလီ ဘင်္ဂါလီ မင်းကိုနိုင် မာမာအေး မိုးသွင် ရခိုင် ရခိုင် ရခုိုင် ရိုဟင်ဂျာ လင်းသက်ငြိမ် သွန်းခ အင်တာဗျူး အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) အိချယ်ရီအောင် (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ဆောင်းဖြူ မောင်စိုးချိန် မောင်ဥက္ကလာ မောင်မောင်လတ် (ရွှေအင်းလေးစာပေ) သောင်းပြောင်းထွေလာ အောင်သူငြိမ်း ပြည်တွင်းစစ် ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ဖြိုးသီဟချို (Myanmar Now)